Ciidamada kala taabacsan Abuu Zubeyr iyo Abuu Mansuur oo maanta Dagaal culus uu ku dhax maray Degmada Saakow – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ciidamada kala taabacsan Abuu Zubeyr iyo Abuu Mansuur oo maanta Dagaal culus uu ku dhax maray Degmada Saakow
9th May 2014 MAREEG Af Soomaali 0
Mareeg.com-Wararka laga helayo Degmada Saakow ee Gobolka Jubada Dhaxe ayaa sheegaya in Maanta halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhaxeeyay Ciidamo kala taabcsan Amiirka Guud ee Xarakada Al-Shabaab Sheekh Mutaar Abuu Zubeyr iyo Ciidamo kale oo daacad u ah Sheekh Muqtaar Roobow (Abuu Mansuur).
Goob joogayaal kusugan Degmada Saakow ayaa u xaqiijiayy Qaar kamid Idaacadaha Magaalada Muqdisho in manta dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamo kala taabacsan uu ka dhacay Degmada Saakow walina halkaasi xiisad laga dareemayo.
Ku dhawaad shan qof oo u badnaa dhinacyadii dagaalamay ayaa la xaiijiyay in ay dagaalkaasi ku dhinteen tiro kalana ay dhaawacyo soo gaareen , waxaana wali laga dareenayaa goobihii lagu dagaalamay kacsanaan iyo cabsi dagaal.
Lama oga ilaa hada waxa keenay dagaalka dax maray Ciidamada kawada tirsan Al-Shabaab , waxaana xusid mudan in Amiirka Al-Shabaab Abuu Zubeyr iyo Sheekh Muqtaar Roobow ay kala fogaadeen fikir ahaan uuna Sheekh Roobay ka baxsaday Degmada Baraawe ee Gobolka Sh/Hoose.
Al-Shabaab kama aysan hadlin warkan sheegaya in ciidamo dhaxdooda ah ay Maanta dagaalameen , waxaana inta badan Xaraka Al-Shabaab aan looga baran ka hadalka dagaalada iyo qalalaasaha dhaxdooda ka dhaca.
Faah faahin ka soo baxaya weerar kooxo hubeysan ku qaadeen Tuulo ku taal Xadka Kenya iyo Somalia
Malaysiya oo xirtay Soomaali loo heysto inuu ka tirsan yahay Alshabaab